Gourmet Bar – Eat Bar အတွေ့အကြုံအသစ်။
အနားယူ အပန်းဖြေဖို့ ဒါမှမဟုတ် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့ဆုံစကားပြောဖို့ စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင် ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အကောင်းဆုံး ကော်ဖီ၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနေ့လည်စာ၊ အဆာပြေမုန့်သရေစာ ဒါမှမဟုတ် တမူထူးခြားတဲ့ လက်ဖက်ရည် စတဲ့ အကောင်းဆုံး သရေစာအရသာတွေကို ရရှိနိုင်ပြီး ခေတ်မီဒီဇိုင်း အပြင်အဆင်ရှိတဲ့ Gourmet Bar က အကောင်းဆုံးပဲပေါ့။
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သက်တောင့်သက်သာ ခံစားရစေမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုနဲ့ အရသာရှိလှပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွှတ်တဲ့ ဟင်းလျာတွေနဲ့အတူ Gourmet Bar ကသင့်ကိုစောင့်ကြိုနေပါတယ်။ ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အထင်ကရ éclairs တွေကို စားကြည့်ဖို့ မမေ့နဲ့နော်။
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့ဆုံတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အလုပ်သဘော တွေ့ဆုံပွဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်တဲ့အခါ Wi-Fi အခမဲ့ သုံးနိုင်တဲ့အပြင် POKE နဲ့ ခံတွင်းတွေ့စေမယ့် မုန့်အမျိုးမျိုးရရှိနိုင်တဲ့ ဒီခေတ်မီ Gourmet Bar ကဖေးမှာ ရုိုးရှင်းစွာနဲ့ပဲ
တွေ့ဆုံနိုင်တယ်လေ။ Terrace ပေါ်တီကိုမှာ အေးအေးဆေးဆေး အနားယုရင်း သတ်မှတ်ထားတဲ့ အဖျော်ယမကာတွေ ကို တစ်ခွက်ဝယ် တစ်ခွက်အလကား ရရှိနိုင်မယ့် ညနေခင်း Happy Hour အစီအစဉ်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ အလင်းရောင်ရရှိပြီး လတ်ဆတ်တဲ့ အပြင်အဆင်နဲ့ အပြည့်အဝ အနားယူလို့ရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က လူကြီးမင်းကို အင်အားပြည့်စေပြီး လန်းဆန်းတက်ကြွစေမှာ အသေအချာပါပဲ။ ဆိုင်မှာထိုင်မစားချင်ရင် takeaway ယူသွားလို့ရသလို delivery ဝန်ဆောင်မှုတွေလည်း ရှိပါတယ်။
နေ့စဉ် နံနက် ၆း၀၀ မှ ည ၇း၀၀ အထိ ဆက်တိုက်
အခုပဲဘွတ်ကင်တင်လိုက်ပါ – H9045-FB7@accor.com / +95 94 44 08 8884
Gourmet Bar Food Menu
Gourmet Bar Beverages Menu
Tired of working from home? Introducing Novotel Yangon Max Co-Working Space catering for the versatile. Your co-working space at GourmetBar, including coffee andapastry with...
ဖုန်း: +95 94 44 08 8884